उडानमा असुरक्षा ! | सु-सुचित नेपालको चित्र
उडानमा असुरक्षा !
पर्यटनमन्त्री रविन्द्र अधिकार र पर्यटन व्यवसायी आङछिरिङ शेर्पासहित ७ जनाको ज्यान जाने गरी ताप्लेजुङको पाथीभरा क्षेत्रमा बुधबार भएको हेलिकप्टर दुर्घटनाले थुप्रै पाठहरु सिकाएको छ । सावधानी नअपनउदा देशले ठूलो क्षति व्यहोरेको छ । प्रतिकूल अबस्था रहँदारहँदै पनि मन्त्री र हेलिकोप्टर धनीलाई चाँडो गन्तव्यमा पुर्‍याउने दबाब चालकमा देखिन्छ नै तर दुर्घटनाको कारण यति मात्र पनि नहुनसक्छ ।
दुर्घटनाको कारण जेसुकै भए पनि मानवीय त्रुटि नै प्रमुख कारण हुन्छ । प्रतिकूल मौसममा यात्रा गर्नुहुँदैन भन्ने सर्वमान्य कुरा हो तर हामी यात्रा गर्दा आफ्नो जीवन बिर्सन्छौं र जतिसक्दो चाँडो गन्तव्यमा जान हतारिन्छौँ । आगामी यात्रा सुरक्षित छ भन्ने ढुक्क नभएर यात्रा गर्नु राम्रो मानिदैन तर पनि हामीले त्यही गरिरहेका हुन्छौँ । यसकै कारण वर्षे्नि दुर्घटना भइरहेका हुन्छन् ।
नेपालमा पटक–पटक विमान दुर्घटना हुने गरेका छन् । विमानभन्दा अझ सुरक्षित मानिने हेलिकोप्टर पनि दुर्घटना भइरहेका छन् । नेपालमा हवाई दुर्घटनापछि गठन गरिएका छानबिन समितिले दिएका प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुन नसक्दा समस् या दोहोरिने गरेको पाइएको छ ।
नेपाली आकाश असुरक्षित बन्दै जानुको थुप्रै कारणहरु छन् । त्यसैले, सम्बन्धित निकायले ती समस्याहरुलाई केलाएर आगामी दिनमा आवश्यक कदम चाल्न जरुरी छ । त्यसैगरि, विगतका दुर्घट्नाको कारणहरुलाई हेरेर सम्बन्धित सबैले पाठ सिक्न आवश्यक छ । अतः नेपालको आकाशलाई सुरक्षित बनाउन जिम्मेवार सबै निकाय गम्भिर बन्न जरुरी छ ।